स्टाइलिश व्यापक कुंडा स्पुत बाथरूम नल
एक ठुलो कुञ्जी टाउकोको बाथरूम नल र अन्य फिक्स्चर बीच मुख्य भिन्नता, ह्याण्डलको स्थिति हो, दुवै तातो र चिसो। एक व्यापक बाथरूम नलमा ह्यान्डलहरू नलको प्रत्येक पक्षमा राखिन्छन्। केन्द्र सेट faucets मा उदाहरण को लागी, तपाईं सिंक मा ड्रिल एकल छेद को उपयोग गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, उदाहरणका लागि एक छेद नलको साथ, तपाईं केवल एक मात्र ह्यान्डलको साथ तातो र चिसो पानी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विपरीत, एक व्यापक बाथरूम नल संग तपाईं बाथरूम सिंक मा तीन प्वाल ड्रिल गर्न आवश्यक छ र तपाईं पानीलाई तातो र चिसो पानी दुबै अलग दुई ह्याण्डलको साथ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। पानीको तापक्रम ठीकसँग नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउँदछ। एक व्यापक बाथरूम नल छनौट गर्दा, तपाईं बिभिन्न विकल्प र समाप्त प्रस्ताव छन्। तपाईं कालो रंगको साथ तपाईंको डेकरमा गहन प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। यो निश्चित रूप मा तपाइँको व्यापक बाथरूम नल तपाइँको बाथरूम मा एक आँखै आकर्षक वस्तु बनाउने छ। यसका साथै तपाईले कार्यक्षमता चयन गर्नुपर्नेछ। तपाइँ तपाइँको कालो फराकिलो बाथरूम नल के गर्न चाहानुहुन्छ? जब तपाइँले छनौट गर्नुहुन्छ, कालो फराकिलो बाथरूम नललाई तपाइँको नयाँ बाथरूम डिजाइनको नयाँ केन्द्र बिन्दुको रूपमा चयन गर्नुहोस्।
कालो व्यापक कुंडा स्पुत बाथरूम नल
राम्रो संयोजन संयोजन व्यापक कुंडा स्पुत बाथरूम नल
सजिलोसँग स्थापना गर्न कालो फराकिलो कुंडा स्पुत बाथरूम नल
WOWOW को कालो कुंडा स्पुत बाथरूम नल यसको द्रुत स्थापना गाईडको साथ स्थापना गर्न सजिलो छ। चिसो र तातो पानी सजिलैसँग द्रुत स्थापना जडानकर्ता संग जोडियो। बाथरूमको नल र ह्यान्डलहरूका लागि तपाईंलाई १ "-१..1" को तीन प्वाल चाहिन्छ र सिink्क डेक ०.२ "-१.२" बाक्लो हुन सक्छ। WOWOW कालो व्यापक बाथरूम नल सेटअप गर्न सकिन्छ एक अर्काको 1.5 देखि 0.2 इन्च, केवल तपाईंको आफ्नै शैली अनुसार। जस्तो कि कालो फराकिलो बाथरूम नल पनि सजीलो गर्न-कायम राख्नको लागि छ, WOWOW यसको उत्पादनमा year बर्षे वारंटी प्रस्ताव गर्न डराउँदैन। आइटम यसको-०-दिन निःशुल्क रिटर्न नीतिले पनि कभर गरिएको छ। WOWOW ले यसको कालो फराकिलो बाथरूम नलमाथि भरोसा गर्दछ र केवल १००% ग्राहक सन्तुष्टिको साथ सन्तुष्ट हुन सक्छ!
संक्षिप्तमा WOWOW कालो फराकिलो बाथरूम नलका फाइदाहरू:
High उच्च प्रदर्शनको साथ एस्टेटिक्स संयोजन गर्दछ
SKU: 2320300B विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: काले, अलग ह्यान्डल, कुञ्जी टाउको, दुई ह्यान्डलहरू